Kenya: Riyo Rumoobi La’ | JAMHURIYADDA
Home Diblomaasiyadda Kenya: Riyo Rumoobi La’
Kenya: Riyo Rumoobi La’
Markasta oo xukunka dacwada uu soo dhawaado, xiisadaha u dhexeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa sii kordhaya. Haddaba, waxaa mudan in lays weydiiyo, Kenya ma aqbali kartaa in riyadeedii ahayd inay boobto Soomaaliya ay rumoobi la’dahay?
Kenya iyo Soomaaliya, waxay Nairobi ku saxiixdeyn Abril 7, 2009 heshiis is-af-garad ah oo ujeeddadiisu ahayd in midkoodna midka kale uusan ka hor istaagin “no-Objection,” gudbinta dalabka qolfoofta.
Nairobi waxay gacantogaaleysay kalsoonidii, kadibna riyadeedii u rogatay “heshiis xeerinaya soohdinta badda ee labada dal.” Xadgudubkaas wuxuu dhacay kadib markii Baarlamanka Soomaaliyeed uu cod-buuxa heshiiskii Nairobi kaga dhigay wax aan jirin “null and void,” (August 1, 2009).
Intaas waxaa dheer, in Kenya 2012kii si sharci darro ah u bixisay ruqsooyin lagu baarayo 8 waaxood oo ku yaal aaga badda Soomaalida, iyadoo qaar ka mid ah ay kala siisay ENI Energy – Talyani, Total – Fransiis iyo Anadarko Petroleum – Maraykan, (Oil & Gas Journal – 27/06/ 2012).
Si kastaba ha ahaatee, Muqdisho waxay tan 2012kii isku taxallujineysay wadahadalo xal doon ah, balse dadaalkaas lama kulmin niyad wanaag iyo laabqaboojis tona.
Shan sanadood oo meermeeris ah kadib (August 28, 2014), Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay ka fursanweyday inay Maxkamada ICJ (International Court of Justice) horgeyso dacwad ka dhan ah Jamhuuriyada Kenya, si ay go’aan uga gaarto xuduud badeedka labada dal, ayadoo la raacayo qaanuunka badaha caalamka.
Febraayo 2dii, 2017 maxakamada waxay diiday marmarsiyadii hor u dhaca ahayd (preliminary objections) ee dowladda Kenya. Maxkamadda ICJ, waxay awood u leedahay inay soo saarto qaraar kama dambeyn ah [xukun aan lahayn ikhtiyaar rafcaan].
Toddobaad ka dib, markii dowladda Soomaaliya ay London ku soo bandhigtay macluumaadka sahminta soosarista khayraadkeeda (seismic data 2014-2016), dowladda Kenya waxay bilowday caraatan iyo colaadin hor leh, inkastoo Soomaaliya ay u xaqiijisay inaysan qaadin tallaabo wax u dhimmi kara dacwada, kuna kalsoon tahay Maxkamada ICJ.
Sideedaba, Nairobi waxaa caado u ah inay ceebeyso xukunka maxkamadaha caalamiga ah. Sida muuqata, waxay bilowday carqaladeenta garsoorka, iyadoo far ku fiiqeyso Guddoomiyaha Maxkamada Garsoore Cabdulqaawi Axmed Yusuf (Standard – June 18, 2019).
Maxkamadda ICJ waxaa fadhiya 15 garsoore oo caalamka looga soo doortay si waafaqsan Qodobbada 2 iyo 15 ee Xeerka ICJ. Haddii dal [Kenya] uu hor yimaad maxkamadda, isagoo garsoore matala ku lahayn majliska, dalkaas waxaa loo ogol yahay inuu si degdeg ah u soo magacowdo garsoore matela inta dacwada ay socoto (Qodobka 35 iyo 37 ee xeerka), kaas oo leh awood la mid ah kuwa joogtada ah.
Ilaa hadda, Nairobi waxba kama qaban cabashooyinkii Muqdisho. Soomaaliya waxay madax-banaanideeda ku ilaalsaneysaa nabad iyo diblomaasiyad, waana taas waxa ay ugu cabatay cadaaladda caalamka, mantana kaga fogaaneyso, ficil iyo qoolba wixii laga yaabo inuu wax u dhimmi karo deris wanaaga, ilaa maxkamadda ka gaareyso go’aan kama dambeys ah.
Ma qarsoona in dowladda Kenya qorsheysatay xeeladdo kala duwan, waxaase la yaab leh in shaqsiyaad Soomaaliyeed ay u adeegsaneyso hagardaamada dalkooda. Falsafi Fransiis ah – Roger Garaudy, ayaa hore u sheegay in cadawgaaga oo laysku jibiyo yahay “dagaal qiimaha jaban – Zero Cost warfare.”
Kenya waxay ka shaxeysaa inay Soomaali isku jibiso, iyadoo ka faa’iideysaneysa seddax arrimood: (1) khilaafka awood qaybsiga siyaasadda; (2) qaranimo xumadda siyasadda qabyaaladda; iyo (3) adeegsiga jawaasista iyo khaa’inu wadanka.
Falanqaynta warbaahinta Kenya, waxay muujinayaan in aqliga awood sheegashada madaxda Kenya ay si weyn uga falcelinayaan go’aan kasto oo lid ku ah, taasoo suurogal ka dhigeyso inay sii jiidanto khilaafka labada dhinac.
Shacabka Soomaalida waxaa u muuqda, in Kenya ay raadineyso sidii xiriirkii Muqdisho iyo Nairobi looga badbaadin kari lahaa inuu sii burburo. Waloo la arki doono wixii dhab ah, haddana waxaa Kenya hor yaal seddax istikhyaar (khiyaar): (1) Inay faragelinta siyaasadda guddaha Soomaaliya faraha kala baxdo; (2) Inay xiriirka labada dhinac dib ugu soo celiso halkii uu joogay January 2019kii; iyo (1) Inay ku qanacdo xukunka maxkamadda ICJ, hadba dhinaca uu u dhaco.
Inkastoo aysan habooneyn in laga hor dhaco xukunka maxkamadda, haddana khilaafyada aan la xallin wax faa’iido ah uma laha gobolka. Soomaaliya iyo Kenya waxay wadaagaan cabsi amni iyo rejo mustaqbal. Taas waxay macnaheedu tahay, hagaajinta xiriirku wuxuu gacan ka geysan karaa xallinta dhibaatooyinka amniga, horumarinta dhaqaalaha iyo dhaqan-bulshadda labada dal ee deriska ah.
Dhammaan xuquuqda maqaalkaan waxaa iska leh Wargeyska Jamhuriyadda. Haddiise aad dib u dhaabacayso waa inay caddeysaa inaad ka soo xigatay Wargeyska Jamhuriyadda. Masawirka: Internetka laga soo amaahsaday.
Previous articleOlympics: Dhacyoodinkii Taariikhada Beddelay
Next articleTaariikh Nololeedka Qoraa Jeanne D’Heam
jamhuriyadda - September 9, 2021 0
AbdulQadir Cariif Qaasim Maalmo kaddib booqashadii Ankara, ayuu Lataliyaha Amniga Imaaraadka safar lama filaan ah ku tagay dalka Qadar. Sheikh...
Sidee Turkigu Saameyn Ugu Yeeshay Afrika Gurmadkii Soomaaliya Kaddib?
jamhuriyadda - August 29, 2021 0
Tafiftiraha Jamhuriyadda Turkiga oo toban sano ka hor August 19, 2011 u soo gurmaday Soomaaliya oo ay ka...
Heshiiska Imaaraadka, Itoobbiya iyo Turkiga Ma Saameyn Doonaa Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya?
jamhuriyadda - August 26, 2021 0
AbdulQadir Cariif Qaasim Ra’iisulwasaaraha Itoobbiya Abiy Axmed ayaa August 18, 2021 booqasho ku tegay magaalada Ankara xilli dalkiisa...
Dibindaabyadii UHURU iyo rogaal celintii FARMAAJO | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia September 27, 2019 At 11:07 pm
[…] yeeshee, tuhun wuxuu ka dhashay qoraal ay Wasiiradda Arrimaha Dibedda Kenya, Marwo Monica Juma soo dhigtay barteeda twitterka oo […]
Leave a Reply to Dibindaabyadii UHURU iyo rogaal celintii FARMAAJO | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia	Cancel reply
Xukunka Maxkamadda ICJ Xageebuu u iilan Doonaa?
Dacwada Badda jamhuriyadda - September 23, 2021 0
AbdulQadir Cariif Qaasim Xukunka dacwadda badda Soomaaliya iyo Kenya oo in muddo ah la sugayey ayuu Sebtember 20,...
Gudaha jamhuriyadda - September 19, 2021 0
Tafiftiraha Jamhuriyadda Fahad Yaasiin iyo Hay’adda Nabadsugida NISA ayaa wajahaya duulaamo siyaasadeed iyo mid sirdoon oo uga imanaya...
Opinion - Ra'yi jamhuriyadda - September 19, 2021 0
By John Irish and Colin Packham, David Brunnstrom, & Humeyra Pamuk PARIS/CANBERRA/WASHINGTON, Sept 17 (Reuters) - France plunged into an unprecedented diplomatic crisis with the...
Muuse Suudi iyo Dottor Dufle oo Doorasho Hufan ku Harqiyey Rajadii Daaci iyo Tarzan
Gudaha jamhuriyadda - September 16, 2021 0
Tafiftiraha Jamhuriyadda Badanaa ciyaaraha kubadda cagta ayaa ka dhaliya bulshada dhexdheeda muran kulul oo socda bilooyin. Marka laga...
Opinion - Ra'yi77